Malemy | January 2022
Amboary ity PC ity dia tsy afaka mihazakazaka Windows 11 Error
Mba hanamboarana ity PC ity dia tsy afaka mihodina hadisoana Windows 11, alefaso ny TPM (Module Platform azo itokisana 2.0), apetraho amin'ny UEFI ny Mode Boot, ary alefaso Secure Boot avy amin'ny BIOS.
Amboary ny sary Tumblr tsy misy hadisoana: jereo ny fifandraisana amin'ny Internet, ampiasao ny mpizaha hafa, alao ny fanitarana U-Block, ampiasao VPN, zahao raha maty ny Tumblr Servers
Inona no atao hoe RAM? Ny RAM dia midika Random Access Memory, endrika fitehirizana izay ampiasain'ny CPU hitehirizana vonjimaika ny angona miasa ankehitriny izy io. Hita io
Ampandehano ny YouTube amin'ny alàlan'ny youtube.com/activate (2021)
Manandrana mampihetsika YouTube amin'ny Smart TV amin'ny taona 2020? Aza manahy fa hanao lisitry ny fomba mora hampiasana ny YouTube amin'ny alàlan'ny youtube.com/activate izahay. Midira raha hampiasa YouTube
Ahoana ny fomba hampiasana ny Pluto TV
Ahoana ny fomba hampandehanana ny pluto tv: kitiho ny toe-javatra ary kitiho ny fisoratana anarana, ampidiro izao ny antsipirihanao. Tsindrio ny ‘Sign-up, ary hampandeha ny Pluto TV-nao
Inona ny fahasamihafana misy eo amin'ny kaonty Outlook & Hotmail?
Fahasamihafana eo amin'ny Outlook sy Hotmail? Ny fahasamihafana lehibe dia ny hoe Outlook dia programa mailaka raha i Hotmail kosa serivisy mailaka Webmail. Midika, fomba fijery
Ahoana ny fomba hanerena ny fampiharana Mac amin'ny alàlan'ny hitsin-dàlan'ny Keyboard
Indraindray dia tsy mamaly ny baikonao ny rindranasa amin'ny Mac anao ary tsy afaka manafoana ireo rindranasa ireo ianao. Ankehitriny, tsy mila mikoropaka ianao, raha sendra trangan-javatra toy izany ianao, satria ireto misy fomba enina ahafahanao mijanona amin'ny lahasa na tranokala na… Vakio bebe kokoa Ahoana ny fomba hanerena ny fangatahana Mac amin'ny alàlan'ny hitsin-dàlan'ny Keyboard
Amboary tsy afaka mametraka ny fanavaozana ny mpamily amin'ny alàlan'ny traikefa GeForce
Amboary tsy afaka mametaka ny fanavaozana ny mpamily amin'ny alàlan'ny GeForce Experience: Tsy afaka nanavao ny mpamily ho an'ny karatra sary NVIDIA aho tamin'ny alàlan'ny GeForce Experience, izany no
Inona no atao hoe Drive-State Drive (SSD)?
Inona no atao hoe drive solid-state? Ny kapila SSD na Solid-State dia fitaovana fitehirizana tsy miovaova izay safidy vaovao kokoa ho an'ny HDD nentim-paharazana
Ahoana ny fomba hanokafana rakitra RAR ao amin'ny Windows 10
Afaka manokatra rakitra RAR mora foana ianao amin'ny Windows 10 miaraka amin'ny fanampian'ny WinRAR na 7-zip. Ireo fitaovana ireo dia arisiva maimaimpoana izay afaka mamaky rakitra .RAR.
Fitaovana mpanara-maso ny vidin'ny Amazon 5 tsara indrindra amin'ny 2021
Mitady fitaovana Amazon Tracker fitaovana tsara indrindra amin'ny 2020 ve ianao? Raha eto ianao dia eto ny lisitray: Camel CamelCamel, PriceDrop, Keepa, Penny Parrot, Jungle Searc
Ahoana ny fomba ahazoana miverina amin'ny Google Search Bar amin'ny efijery Android Home
Nesorinao tsy nahy ny widget bara fitadiavana Google tao amin'ny efijery Android anao ary tsy fantatrao ny fomba hamerenana azy? Hanampiana ny Fikarohana Google
Fafao tsy tapaka ny kaonty Gmail (Miaraka amin'ny sary)
Azonao atao tokoa ny mamafa ny kaonty Gmail maharitra tsy mila mamafa ny kaontinao Google iray manontolo, raha mbola afaka mampiasa serivisy Google hafa
Fahasamihafana eo amin'ny Hotmail.com, Msn.com, Live.com & Outlook.com?
Misavoritaka ve ianao eo amin'ny Hotmail.com, Msn.com, Live.com, ary ny Outlook.com? Manontany tena ianao hoe inona izy ireo ary inona no mahasamihafa azy ireo? Eny, manana ve ianao
Ahoana ny fomba fanakanana ny doka YouTube manelingelina amin'ny tsindry tokana
Sakano ny doka YouTube manelingelina amin'ny fividianana YouTube Premium na manandrama mampiasa Adblock ho an'ny fanitarana YouTube na mizaha YouTube tsy misy doka ao amin'ny ViewPure
Amboary ny PlayStation Nisy lesoka nitranga tamin'ny fisoratana anarana
Ahoana ny fomba hitadiavana mailaka ao amin'ny Outlook?
Ahoana no ahatsiarovanao ny mailaka amin'ny Outlook? Fomba iray hafa ahafahana mitadidy na manolo hafatra ao amin'ny Outlook dia ny fanemorana ny fandefasana mailaka ao amin'ny Outlook.
Ahoana ny fomba hampiasana ny maody maizina YouTube
Ahoana ny fomba hanafoanana ny DEP (fisorohana ny fanatanterahana data) ao amin'ny Windows 10
Ahoana ny fomba famonoana ny DEP (fisorohana ny fanatanterahana data): Ny fisorohana data indraindray dia miteraka fahadisoana ary raha izany dia zava-dehibe ny famonoana azy ary amin'ity.
Ny tantana Instagram dia toy ny fitaovana fanondroana izay manome anao tsy manam-paharoa eo amin'ny lampihazo. Tsy manam-paharoa aminao ny tahonao Instagram.